डा. अरूणा पाेखरेल - कान्तिपुर समाचार
स्त्री तथा प्रसूति राेग विशेषज्ञ
डा. अरूणा पाेखरेलका लेखहरु :
कोरोना भाइरस हामी सबैको लागि नयाँ हो । त्यसैले गर्भावस्थामा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ, यकिनका साथ भन्न सकिन्न । रिसर्च भइरहेका छन् । तर विगतका महामारीपश्चात् गरिएका अध्ययनमा चाहिँ समय अगाडि बच्चा जन्मिएको पाइएको छ । सोही कारण त्यस्तो हुन नदिन गर्भवती र उनको परिवार अहिले सचेत हुन जरुरी छ । भाइरसबाट बच्न हातले नाक, आँखा, मुख नछुने र साबुनपानीले हातधुनेजस्ता सुरक्षित विधि अपनाउनु परिहाल्यो ।